Rita, Writing for My Sake!: ဂျူး နှင့် ၀င်းငြိမ်း အင်တာဗျူး (၈)
Posted by Rita at 5/12/2009 09:24:00 PM
အဲဒီ ရှစ်ပုဒ်စလုံး ကျနော်ဖတ်ဖူးပြီး အားလုံးကိုလည်း ကြိုက်တယ်ခင်ဗျာ။
အဝေးဆုံးခရီးသို့ အနီးဆုံးအချိန် ဆိုရင် ဖတ်ရင်းနဲ့ ရင်ထဲမှာ ဆို့လာပြီး ငိုချင်လာမိတယ်။
ဂျူးက ကျနော်တို့နယ်သားလေ။ ကုန်းဇောင်းမှာ နေဖူးတယ်။ ကျနော်တို့ ရွာနဲ့ လေးရွာလောက်ပဲ ခြားတယ်။း-) (မဆီမဆိုင် ဂျူးအရောင်နဲ့ ၀င်ပြီး ပါးပြောင်ကြည့်တာပါဗျာ)
ဂျူး က ငါ့လိုပဲ အညာသူပေါ့ လို့ သူငယ်ချင်း အောက်သူ၊ ရန်ကုန်သူတွေကြား ကျွန်မလဲ မဆီမဆိုင် မဏ္ဍတ်တိုင် တက်တတ်ပါတယ် ကိုပေါရဲ့။
ဆရာမဂျူးကို အချစ်ဝတ္ထုရေး ဆရာမတစ်ယောက်လားလို့ ဦးဝင်းငြိမ်းက မေးတော့ ဆရာမဂျူးက သူ့ကို အချစ်ဝတ္ထုရေး ဆရာမလို့ နာမည်တပ်ရင်တော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လက်ခံမိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို ဝန်ခံရရင် ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်တစ်ခုကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပုံဖော်တတ်ပြီး၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတော့ အမြဲလေးလေးနက်နက် ဖော်ကျုးတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ စာပေလက်ရာကို သဘောကျမိလို့ပါပဲ ... ဆရာမဂျူးရဲ့ အချစ်ဝတ္ထုတွေ တော်တော်များများဖတ်ခဲ့ဖူးသလို ... အချစ်ဝတ္ထုလို့ သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ ဝတ္ထုတွေကိုလည်း အချိန်ယူပြီး လေ့လာခဲ့ဖူးပါတယ် ... ဆရာမဂျူးပြောတာ ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ် ... သူ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရဲ့ အနှစ်သာရဟာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးကို စာဖတ်သူပါလာအောင် ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာချည်းပါပဲ .. ဒါကလည်း သူ့ရဲ့ ပါရမီလို့ပဲ ပြောရမလား .. အခွင့်ကြုံလို့ ဂျူးဝတ္ထုတစ်ချို့ထဲက ကျွန်တော်သဘောကျမိတဲ့ စာကြောင်းတစ်ချို့ကို ဒီနေရာကနေ ပြန်လည်ဖော်ပြချင်ပါတယ် ..
" အမှတ်တရ "
မောင်က လိုက်ခဲ့ဟု ခေါ်တုန်းကလည်း မောင့်ဘေးမှာ ကျွန်မပါသည်။ မောင်ကနေရစ်ခဲ့ဟု ဆိုပြန်တော့လည်း မောင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် စာတစ်စောင် စကားတစ်ခွန်းမျှ မောင်မကြားရစေပဲ ကျွန်မငြိမ်သက်စွာ နေရစ်ခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ။အဲသည်အထိ ကျွန်မမောင့်ကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါသည် မောင် ... ( စုစုထွေး ) -
" ချစ်သူရေးတဲ့ကျွန်မရဲ့ညတွေ "
ရှင့်ကို ကျွန် လိုအပ်ခဲ့တာမှ သည်းအသန်လိုအပ်ခဲ့တာ။
အသက်ရှုဖို့ လေကို လိုအပ်သလို လိုခဲ့တာ၊ အဲဒါ ရှင်အသိဆုံးပဲမဟုတ်လား၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒါတွေအားလုံး ဖြစ်အောင် ရှင်လုပ်ယူခဲ့တာလေ...
အခုတော့ ရှင်မရှိရင် ကျွန်မ အသက်မရှုတတ်တော့ဘူး ... ရှင်သိတယ်မဟုတ်လား..ဟင်... အဲလိုဖြစ်အောင် ရှင် တမင်လုပ်ခဲ့တာ .... ရှင့်ကိုပဲ သွေးရူးသွေးတန်း တွယ်တာနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မကို စကားတစ်ခွန်းတည်း နဲ့ ဖြတ်ရိုက်ပစ်ခဲ့တယ် ။
မင်းကို ကိုယ်ဘယ်တုန်းကမှ မလိုအပ်ခဲ့ဘူးတဲ့၊ရှင် အဲဒီစကားနဲ့ ကျွန်မကို အသေသတ်ခဲ့တာ၊
ဟုတ်တယ်....ရှင့်ဘ၀မှာ ကျွန်မ ရှိဖို့ မလိုဘူး....
ကျွန်မသိတယ်၊အဲဒီအတွက် ရှင့်ကို မကျေဘူး သိရဲ့လား၊ တစ်သက်လုံးမကျေဘူး။ ..... ( ရတနာ )
မိန်းမတစ်ယောက်ကို သူ အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးမိသွားပြီဆိုတာကို ယောင်္ကျားတစ်ယောက် သိခွင့်ရတဲ့အချိန်ဟာ အဲဒီ မိန်းမ သူ့ဘ၀ထဲကနေ
ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီ ... ( နေသန့် )
" လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးမှာ "
မိန်းမတွေဟာ တော်တော်ပြတ်သားတယ်ဗျ.... ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားတွေက
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးဖြတ်ချ ချပေးတဲ့သူတွေအဖြစ် ဂုဏ်ယူနေကြတယ်။ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်
ကိုယ် မနိုင်မနင်းနဲ့ နောင်တပဲရတော့မလိုလို၊ ပြန်ပဲ ဘွာခတ်ရတော့မလိုလို တွေဝေနေတုန်း မိန်းမတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးသွားတယ်
( နေရောင်ခန့် )
" ချစ်သူလား စံကားတပွင့်ပွင့်ခဲ့တယ် "
ငါကနင့်လို ရည်မှန်းချက်တွေလဲ မကြီးပါဘူး။ လောကကိုလည်း အများကြီးလဲ မပေးနိုင်ပါဘူး။ လောကဆီကလည်း အများကြီးမယူချင်ပါဘူး။ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကိုတော့ ပျော်ရွှင်စေချင်တယ်။
စ်ိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ သူစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ငါဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရလုပ်မယ်။ ဘယ်ကိုပဲ သွားရသွားရ သွားမယ်။ ငါ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို သူ့ကိုပေးချင်တယ်။ ခက်တာက ပေးချင်တိုင်း ပေးခွင့်မရှိသူကို မိန်းမလို့ခေါ်တယ် .... ( မေဇော်နု )
ဆင်ခြင်ဥာဏ်နဲ့ ဆန္ဒအကြား ပဋိပက္ခထဲမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ခါလောက်တော့
ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခွင့် ရှိတယ်။ အဲဒီအမှားက ကိုယ့်ဘ၀ကို ဖျက်စီးပစ်လိုက်စေဦးတော့လေ ...
( မြဦးမေ )
လူတွေရဲ့ဘ၀မှာ တစ်ခုခုကို ရနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ မယူခဲ့ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ခါရတဲ့အချိန်မှာ ဒါကို မယူသင့်တော့ဘူး .... ( ခွန်သာ )
ဒါတွေက ဂျူးဝတ္ထုတွေထဲက သဘောလည်းကျသလို အတွေးလည်း နဲနဲ များစေတဲ့ စာကြောင်းလေး တစ်ချို့ပါ .. အားလုံးလည်း တစ်ထိုင်တည်း မြည်းစမ်းလို့ ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
ဒီစာကြောင်းတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဆရာမဂျူးဟာ အချစ်တစ်ခုကို ရေးချယ်သီဖွဲ့တဲ့ အချိန်မှာ တော်တော် အနုစိတ်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံက ဟာကွက်မရှိအောင် ဖြည့်သွားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ် .. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ဂျူးရဲ့ အချစ်ဝတ္ထုတွေကို တော်တော်လေး သဘောကျပါတယ် .. ဒါပေမယ့် အချစ်မဟုတ်တဲ့ ဝတ္ထုတွေကို ဖတ်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဆရာမဂျူးထက် ဆရာမ မစန္ဒာရဲ့ ဝတ္ထုတွေကိုပဲ ဦးစားပေးရွေးချယ်မိမယ်ထင်တယ် .. ကျွန်တော်က ဆရာမ မစန္ဒာ ရဲ့ ဇာတ်ကောင်အချင်းချင်း Link ချိတ် သွယ်ဆက်မှုကို ဂျူးရဲ့ စာအရေးအသားထက် ပို သဘောကျပါမိပါတယ် .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုဒေးပြန်လည်ဖော်ညွန်းခဲ့တော့ အချက်အလက်များသည်လဲကျနော် ဂျူးဖတ်စဉ်က
Your all comments 1 to 8 are so details and nice.
I not yet read above 8 articles of Ju.
Read since 2001.
read since 2004.